#knowledge Trending Posts - Neoxian City
အခက်ဆုံးပဲ အားလုံးသော မိတ်ဆွေအပေါင်း မင်္ဂလာပါ... လောကကြီးမှာ တစ်ခုလိုချင်လျှင် တစ်ခုကိုပေးရတာက လောကနိယာမတရားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... တစ်ခုကို ဆုပ်ကိုင်ထားလျှင် နောက်တစ်ခုကိုတော့…
ကျွန်တော်ပြောသော စင်္ကပူ - အပိုင်း ( ၃၄ ) ( Henry Aung ) မင်္ဂလာပါ။ ယခုတလော Cryptocurrency များကလည်း ကျဆင်းနေပြီး ကျွန်တော်တို့ Hive ကလည်း ပြား ၇၀ ကျော်သို့ ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့နံနက်ကတော့ ပြား ၈၀ သို့ ပြန်လည် ဦးမော့လာခဲ့ရာ…
ကျွန်တော်ပြောသော စင်္ကပူ - အပိုင်း ( ၃၅ ) ( Henry Aung ) မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်၏ မပြီးပြတ်သေးသော စင်္ကပူလုပ်ငန်း ခွင် အတွေ့အကြုံ အကြောင်း ဆက်ကြပါအုံးစို့။ ဤ စာအုပ်ဖြန့်ချီသော Warehouse ဖြစ်သည့် Pensing ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်ရသည်မှာ ၃…
ကျွန်တော်ပြောသော စင်္ကပူ - အပိုင်း ( ၃၂ ) ( Henry Aung ) မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်၏ မပြီးပြတ်သေးသော စင်္ကပူ အတွေ့အကြုံ များ အကြောင်း ဆက်ပါအုံးမည်။ ယခုတလော ဘာရယ်မဟုတ် ဟိုယခင် အတိတ် အကြောင်း များသာ သတိရနေသည်ဖြစ်ရာ ကျွန်တော်၏ အတိတ်အကြောင်း…
ကျွန်တော်ပြောသော စင်္ကပူ - အပိုင်း ( ၃၃ ) ( Henry Aung ) မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်၏ စင်္ကပူ အတွေ့အကြုံ အကြောင်း ဆက်လက်ဖေါ်ပြပေးပါအုံးမည်။ ယခင် ဆောင်းပါးတွင် ကျွန်တော့အနေဖြင့် စာအုပ်များ ဖြန့်ချီသော Pensing ဟူသော ကုမ္ပဏီ ၏ Warehouse /…
Local Economical Knowledge of Taungthaman Loch Hello friends. I will share local income sources of 'Taungthaman Loch' as local knowledge. (U Bein Bridge) Taungthaman loch is located in Mandalay Region, Myanmar. I
ကျွန်တော်ပြောသော စင်္ကပူ - အပိုင်း ( ၂၉ ) ( Henry Aung ) မင်္ဂလာပါ။ ဤ ကျွန်တော်ပြောသော စင်္ကပူ ခန်းဆက် ဆောင်းပါးမှာ ကျွန်တော် စင်္ကပူ တွင် အလုပ်သွားလုပ်ရင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံများ အား ရေးသားထား ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခင် Steemit…
Is internet Doctor is safe ? Do you hear the "Internet Doctor" title? Well, it's actually us who don't have any professional degree but we gather health and disease information from the web and started to…